သတင်း - Fully Lined Polyurethane Knife Gate Valve Abrasive Resistant
ဖိအားအဆင့်- အတန်းအစား 150၊ PN16၊ PN10
Flange ချိတ်ဆက်မှု- Flange
Casting- (GGG40၊ GGG50၊ A216 WCB၊ A351 CF3၊ CF8၊ CF3M၊ CF8M၊ A995 4A၊ 5A၊ A352 LCB၊ LCC၊ LC2) Monel၊ Inconel၊ Hastelloy၊UB6
ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ MSS SP-81
မျက်နှာချင်းဆိုင် MSS SP-81
စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း။ MSS SP-81
Polyurethane Knife Gate Valve၎င်းသည် အညစ်အကြေးဒဏ်ခံနိုင်သော အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Polyurethane Knife Gate Valve (NSW) သည် သွားဖုံးရော်ဘာနှင့် အခြားပိုပျော့ပြောင်းသည့်အလွှာ သို့မဟုတ် အင်္ကျီလက်ပတ်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းထက်ကျော်လွန်သည့် အရည်အသွေးမြင့် ယူရီသိန်းဖြင့် စီတန်းထားသည်။
1. Zero leakage ။ အပြည့်အ၀စီတန်းထားသော ယူရီသိန်း အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်နှင့် ပုံသွင်းထားသော အီလက်စတိုမာ တံခါးတံဆိပ်သည် အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အဆို့ရှင်ပိတ်ခြင်းနှင့် အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည် နှစ်ရပ်စလုံး ယိုစိမ့်မှုကို အပြီးတိုင် ကာကွယ်ပေးသည်။
2. Extended wear-life ။ အရည်အသွေးမြင့် အညစ်အကြေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ယူရီသိန်းအလွှာများနှင့် ခိုင်ခံ့သော stainless ဓားတံခါးများအပြင် valve ကိုယ်တိုင်၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည် အလွန်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။
3.Bi-directional အပိတ်။ နောက်ကြောင်းပြန်စီးဆင်းမှုဖြစ်လာသောအခါ NSW ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
4.Self-flushing ဒီဇိုင်း။ valve ပိတ်နေစဉ်အတွင်း beveled ဓားတံခါးသည် beveled urethane liner ထိုင်ခုံဆီသို့ slurry စီးဆင်းနေသော slurry များကို လမ်းကြောင်းလွဲစေပြီး လှိုင်းထန်လာပြီး စီးဆင်းမှုကို အားကောင်းစေကာ တံခါးသည် ထိုင်ခုံထဲသို့ အကျုံးဝင်သည်နှင့်အမျှ ယူရီတင်း၏အောက်ခြေမှ slurry များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
5. အဆင်ပြေသော ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု။ နောက်ဆုံးတွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် ဝတ်ဆင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ (ယူရီသိန်း၊ ဂိတ်ပေါက်များ၊ ဓားတံခါးများ) အားလုံးကို လယ်ကွင်းတွင် အစားထိုးနိုင်သည်။ Valve ဘော်ဒီနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁။စာကြောင်းများ ယူရီသိန်း အမျိုးအစားများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ဂိတ်။ hard chromium coated ရှိသော SS304 တံခါးများသည် စံနှုန်းများဖြစ်သည်။ အခြားသတ္တုစပ်များကို ရနိုင်သည် (SS316၊ 410၊ 416၊ 17-4PH…) ရွေးချယ်နိုင်သော တံခါးအပေါ်ယံပိုင်းကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။
3.PN10၊ PN16၊ PN25၊ 150LB တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
4.Optional actuators များ ရရှိနိုင်ပါသည်။
တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၃-၂၀၂၁